Salaamanews » Mareykanka oo ballan qaaday tababarka ciidamada xoogga dalka Soomaaliya (Sawirro)
Home » Warar Mareykanka oo ballan qaaday tababarka ciidamada xoogga dalka Soomaaliya (Sawirro) Print - Daabace: SalaamaNews - Dec 7th, 2012 // Ka Jawaab	Qoraallo La Xiriira
Puntland oo furtay xarun dalxiis (Sawirro)Daawo: Sawirrada booqashadii dalka Ugandha ee Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh MaxamuudMadaxweyne Xasan Shiikh oo la kulmay dhigiisa Uganda iyo madax kaleMaxaa keena sideese looga hortagi-karaa halista cudurka dilaaga ah ee HIV-AIDS (Daawo wacyi-galinta dhaqtar Xaraare).Wafdi ka socda Uganda oo kulan xasaasi ah la qaadanaya golaha amaanka (Salaamanews)-Safiirrada Soomaaliya iyo Mareykanka u jooga waddanka Uganda, ayaa kulan muhiim ah ku qaatay magaalada Kampala ee caasimadda Uganda, waxayna ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada waddan iyo iskaashi dhexmara safiirradda labada waddan.
Kulanka oo ay goob joog ahaayeen safiirka Soomaaliya iyo qunsulka Soomaaliya ee dalka Uganda, ayaa waxaa leysku soo hadal qaaday sida ay xukuumadda Washington kaga qeyb qaadan karto horumarinta ammaanka iyo wanaajinta xiriirka labada dhinac.
Safiirka Mareykanka ee dalka Uganda Ambassador Soctt.H Delisi oo la hadlayay warbaahinta ayaa tilmaamay in xaalada ammaan ee dalka Soomaaliya, wuxuuna sheegay in dalku uu hadda isku riday wadadii horumarka.
Mr Soctt.H Delisi ayaa Sidoo kale ballan qaaday in dowladiisu ay gacan weyn ka geysan doonto qalabeynta iyo gacn siinta ciidamad baliiska Soomaaliyeed.
Kulanka labada safiir ee Soomaaliya iyo Mareykanka Dr Sayd Axmed Shiikh Daahir iyo Soctt.H Delisi ayaa waxaa uu imanayaa xili wadamada daneya arimaha Soomaaliya ay gacan weyn ka geysanayaan horumarinta Soomaaliya.
Tags: warar « Qoraalkii HoreXukuumadda Washington oo wadda qorsha ka dhan ah kooxda Al-shabaab	Qoraalka Xiga »Xildhibaankii Islii oo qarax lagu dhaawacay	Halkan Hoose ku Jawaab